ကောင်းတဲ့အတိတ်ကိုပဲတွေးပြီး အနာဂတ်နေ့ရက်တွေကိုအကောင်းဆုံးရှင်သန်ဖို့ ဆန္ဒပြုလိုက်တဲ့သားညီ - Cele Gabar
ကောင်းတဲ့အတိတ်ကိုပဲတွေးပြီး အနာဂတ်နေ့ရက်တွေကိုအကောင်းဆုံးရှင်သန်ဖို့ ဆန္ဒပြုလိုက်တဲ့သားညီ
By RainowPosted on July 1, 2020
သားညီကတော့ လက်ရှိအချိန်မှာရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့သာမက ဒါရိုက်တာတစ်ယောက်အနေနဲ့ပါ အနုပညာအလုပ်တွေလုပ်ကိုင်နေသူတစ်ယောက်ပါ။ (၂၀၂၀) ခုနှစ်အတွက် ဒါရိုက်တာတစ်ယောက်အနေနဲ့ “ကမ်း” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို ရိုက်ကူးနေသလို ဒါရိုက်တာဏကြီးရိုက်ကူးနေတဲ့ ” ချစ်ခင်စမှော်ရုံ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာလည်း အောင်ကြီး ကာရိုက်တာနဲ့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်နေသူပါ။
လတ်တလောကိုဗစ်ကာလမှာတော့ အလုပ်တော်တော်များများရပ်နားထားခဲ့ရပြီး ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေးတွေလည်း လက်ရှိအချိန်ထိပြန်မစနိုင်သေးပါဘူး။ သားညီကတော့ (၂၀၂၀)ခုနှစ် နှစ်ဝက်ကျိုးသွားတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ သူ့ရဲ့ခံစားချက်တချို့ကိုမျှဝေခဲ့ပါတယ်။ “နှစ်တစ်ဝက်ကျိုးသွားခဲ့ပြီ… ပြီးခဲ့တဲ့ ခြောက်လတာ ကာလမှာ… ဒုတိယ သုံးလ လုံးလုံး ဘာအလုပ်မှမရှိပဲ ငုတ်တုတ်ထိုင်နေခဲ့ရတယ်…. စိတ်ဓါတ်တွေကျနေခဲ့ရတယ် …ဒါပေမယ့် ပထမသုံးလတာကာလမှာ…. ဒါရိုက်တာအနေနဲ့ ရုပ်ရှင်တစ်ကား… သရုပ်ဆောင်အနေနဲ့ ရုပ်ရှင်တစ်ကားရိုက်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ် … အရည်အတွက်နည်းပေမယ့် ကိုယ်ရိုက်ချင်တာရိုက်ခွင့်ရခဲ့တယ်… ကိုယ်သရုပ်ဆောင်ချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်း လုပ်ခွင့်ရခဲ့တယ် …
ကျွန်တော်တို့မှာ စိတ်ညစ်စရာ အတိတ်တွေရှိခဲ့သလို … ပြန်တွေးလိုက်တိုင်း အားရကျေနပ်နေရတဲ့ အတိတ်တွေလည်းရှိခဲ့ဖူးပါတယ် … ဘယ်အတိတ်ကို တွေးမလဲဆိုတဲ့ မိမိရဲ့ရွေးချယ်မှုကသာ အဓိကပါ …အဲ့တော့ စိတ်ဓါတ်တက်ကြွစရာ အတိတ်တွေကိုပဲပြန်စဉ်းစားရင်း နောက်လာမယ့် နေ့ရက်တွေအတွက် အကောင်းဆုံး ပြင်ဆင်နေထိုင် ကြရအောင်ဗျာ …မုန်တိုင်းပြီးရင်တော့ လေပြေ လာကိုလာမှာပါ” ဆိုပြီး သူ့ရင်ထဲကယုံကြည်ချက်တချို့ကို မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ အခုလိုအချိန်မှာတော့ အလုပ်တွေရပ်နားခဲ့ရလို့ လူတော်တော်များများအဆင်မပြေဖြစ်နေပေမယ့် သားညီကတော့ ပျော်စရာအတိတ်ကိုပဲ တွေးပြီး အနာဂတ်နေ့ရက်တွေကိုရှေ့ဆက်ဖို့ ပရိသတ်တွေကို ဆန္ဒပြုခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Source – Thar Nyi
Posted in Cele NewsTagged Cele, Cele Gabar, Cele Myanmar, Celebrities, Celebrities Myanmar, Celebrity, Celebrity Myanmar, Myanmar Cele, Myanmar Celebrities, Myanmar Celebrity, Thar Nyi, ဆယ်လီ, ဆယ်လီကမ္ဘာ, ဆယ်လီမြန်မာ, မြန်မာဆယ်လီ, သားညီ
Previous post မောင်ချောလေးရဲ့ မွေးနေ့အတွက် ချစ်ခြင်းမေတ္တာအပြည့်နဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးလိုက်တဲ့ နန်းဆုရတီစိုး
Next post ကိုရီးယားသီချင်းကို Cover ပြန်ဆိုရာမှာ ပရိသတ်တွေအားပေးမှုရနေတဲ့ ဝိုင်းလေး